Fitsipiky ny fisafidianana ny valizy fananganana valves-lahatsoratra ara-teknika-Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan valve no marika)
Fitsipiky ny fisafidianana ireo karazana fananganana valves-ball
Fotoana: 2020-10-09 Hits: 84
Ny valves baolina mifototra amin'ny fananganana baolina dia misy karazany roa: valve ball mitsingevana ary valizy mitaingina trunnion. Noho ny karazany roa amin'ny baolin'izy ireo, ny baolina mitsingevana sy ny trunnion dia nibontsina ny baolina. Ho fanampin'ireto karazana fanamboarana baolina roa ireto, ny valves baolina dia misy ihany koa karazana baolina hafa toa ny karazana hemisfera, ny karazana V, ny karazana eccentric ary ny karazana orbital (ny baolina mandray ny swing swing), izay ireo karazana patanty mpanamboatra sasany.
Ny baolina mitsingevana
Ny valizy mitsingevana dia manana rafitra tsotra ary voahidy amin'ny herin'ny tsindry famehezana ateraky ny tsindry paompy. Ny valizy mitsingevana dia tsy mety amin'ny tranga misy fantsona lehibe, na ho mavesatra loatra ny fandidiana na koa tsy azo fehezina raha ambany ny tsindry mpanelanelana hanosehana ny baolina hamehezana. Amin'ny toe-javatra mahazatra, ny fampifangaroana ny isa faneriterena sy ny savaivony ho an'ny valizy mitsingevana dia voatanisa toy izao.
A. Kilasy150: Hatramin'ny DN300
B. Kilasy300: Hatramin'ny DN250
C. Class600: Hatramin'ny DN150
Raha ny vatan'ny valizy sy ny seza valizy dia namboarina araka ny tokony ho izy, azo ampiasaina ihany koa ny valizy mitsingevana amin'ny refy lehibe misy savaivony hatramin'ny DN300.
Ny valizy mitsingevana dia mety manana endrika iray voaisy tombo-kase na famolavolana seza voaisy tombo-kase arakaraka ny tanjon'ny fampiharana. Ny tombony amin'ny seza misy valiny voafetaka famolavolana tokana dia ny faneriterena ao anaty lohan'ny valizy dia azo avela ho azy.
Ny fangaro eo ambonin'ny valin'ny tsindry sy ny savaivony ho an'ny valizy mitsingevana dia tsy ny safidin'ny mpanamboatra valizy rehetra. Rehefa ilaina ny maka karazana baolina hafa dia tokony aseho ao amin'ny takelaka valizy valva.
Ny Trunnion mitaingina Ball
Ny valizy mitaingina trunnion dia voaisy tombo-kase amin'ny alàlan'ny tsindry famehezana ateraky ny valin'ny valizy sy ny seza valizy mitsingevana tohanan'ny lohataona. Voaforon'ny seza valizy, ny peratra famehezana, ny lohataona manohana, sns., Ny seza valizy mitsingevana dia manana rafitra sarotra sy habe lehibe. Na izany aza, ny valizy baolina trunnion dia manana fahamboniana miharihary fa azo hamehezana azy io raha tsy misy ny tsindry mpanelanelana, ary afaka manana fampisehoana famehezana azo antoka. Mety ho voaisy tombo-kase mora foana koa izy io. Ireo rehetra ireo dia mahatonga azy ireo ampiasaina matetika amin'ny toe-javatra lehibe amin'ny savaivony.
Raha tsy misy fepetra manokana amin'ny valizy baolina trunnion, dia tsy afaka manala ny tsindry amin'ny lava-bato samirery izy ireo. Noho izany, rehefa misy fepetra takiana manokana dia tokony aseho ao amin'ny takelaka momba ny valizy.
Next: Valve Ball mitsingevana sy Trunnion mitaingina fanodinam-bola